Zotra nasionaly : atomboka ny asa toby fiantsonana eny Andohatapenaka | NewsMada
Zotra nasionaly : atomboka ny asa toby fiantsonana eny Andohatapenaka
Manomboka ny asa fanamboarana ny toeram-piantsonan’ny kaoperativa mpitatitra amin’ny zotra nasionaly eny Andohatapenaka, sahanin’ny minisiteram-panjakana momba ny Tetikasan’ny fiadidiana ny Repoblika. Tetikasa iarahana amin’ny Total, miantoka ny famatsiam-bola feno amin’izany. Aorian’ny fahavitan’ny asa, hiandraikitra ny fitantanana izany ny minisiteran’ny Fitaterana. 4 ha eo ho eo ny hanamboarana izany fotodrafitrasa vaovao izany, ho an’ireo zotra mianavaratra sy ny mianandrefana rehetra.
Heverina ho vita amin’ny volana septambra io asa io. Azo mbola hitarina izany any aoriana, araka ny fanazavana. Hanara-penitra ny toerana ka afaka mandray fiara 400 sy mahazaka olona 4.000, hanorenana toerana malalaka ho an’ny mpandeha, trano fivarotana isan-karazany sy fisakafoana araka ny filàn’ny mpandeha sy ny mpitatitra sy ny mpandeha. Hisy toby famatsiana solika koa hipetraka eo.
Ho solon’ny Fasan’ny Karana ny eo Andohatapenaka, nokajina araka ny fotoana mahabetsaka ny mpandeha ny fanatanterahana ny asa ankehitriny, mahazaka fiara 300 hatramin’ny 400 miainga isan’andro. Nampanarahana izany ny fenitra fanamboarana azy mba hanomezana fahafaham-po ny mpandeha sy ireo kaoperativa. Tany nindramin’ny fanjakana ny eo Fasan’ny Karana, ka tonga ny fotoana izao hamerenana izany amin’ny tompony.